သတ်မှတ်ချက်များ - InstaZOOM
ပင်မစာမျက်နှာ » သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူကြောင်း ကြေညာပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းတို့ကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို သေချာလိုက်နာပါ။
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် တရားဝင်သည်။
2. မူပိုင်ခွင့်ရထားသော ပစ္စည်းကို ကူးယူခြင်း ခွင့်မပြုပါ။
3. ကျော်တက်ခွင့်မရှိပါ။ instazoom.mobi ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောဖိုင်များကိုဖြန့်ပါ။
4. သင်သာလျှင် ၎င်းတို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို မှတ်တမ်းတင်မထားပါ။
6. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများတွင် ဖိုင်များကို အကန့်အသတ်မရှိ သိမ်းဆည်းမထားပါ။
7. ဒေါင်းလုဒ်များအတွက် တောင်းဆိုမှုများကို DMCA တွင်ကဲ့သို့ သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်သည် (ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေ) ဖော်ပြခဲ့သည်။
အသုံးပြုမှု စည်းကမ်းချက်များ အပြည့်အစုံ-
လျှင်သင် instazoom.mobi သုံးပါ သို့မဟုတ် ဖွင့်ပါ။ instazoom.mobi ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှု စည်းကမ်းချက်များကို သင်သဘောတူသည်။ instazoom.mobi ဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း။ မင်းကို လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ instazoom.mobi သို့မဟုတ် ဤစည်းမျဥ်းများကို လက်မခံပါက ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန်။
ကုမ္ပဏီသည် သင့်အား ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကို အချိန်မရွေး အကြောင်းပြချက်မပေးဘဲ အပ်ဒိတ်များ ပေးပို့နိုင်သည်ကို သင်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် တင်ထားသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းများဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများဖြင့် ချည်နှောင်ထားရန်လည်း သဘောတူပါသည်။
ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများထဲမှ တစ်ခုကို သင်သဘောမတူပါက၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုအား ချိုးဖောက်ပါက သင်၏ခွင့်ပြုချက်သည် အလိုအလျောက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ instazoom.mobi ဤလိုင်စင်သည် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ အချိန်မရွေး ရပ်စဲနိုင်သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ဇန်နဝါရီ 1 ရက်၊ 2014 တွင် နောက်ဆုံးမွမ်းမံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လာရောက်လည်ပတ်သူများထံမှ မည်သည့် IP လိပ်စာများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူဒေတာကိုမျှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို လူမည်မျှလာရောက်ကြည့်ရှုရန် Google Analytics ကို အသုံးပြုပါသည်။ http://www.google.com/analytics/tos.html
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြော်ငြာရန်အတွက် ပြင်ပမှ ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုပါသည်။ instazoom.mobi ကြော်ငြာများပြသရန်။ အချို့သော ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြော်ငြာသည့်အခါတွင် cookies နှင့် web beacons ကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို အသုံးပြုကြပြီး ကြော်ငြာရှင်များထံ သင့်အကြောင်းအချက်အလက်များကို ပေးပို့ပေးပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြင့် ကြော်ငြာများကို ပြသရန်အတွက် ၎င်းသည် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ၀ဘ်ဆိုဒ်တွင် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုပါ။
1. သင့်နိုင်ငံတွင် မည်သည့်ဥပဒေကိုမှ မချိုးဖောက်ပါနှင့်။
2. တရားမဝင်မူပိုင်ခွင့်ရှိသော တေးဂီတကို ဒေါင်းလုဒ်မလုပ်ပါနှင့်။
3. Instazoom- ဖိုင်များကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူပါသည်။
- ဤအရာသည် ရိုးရှင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Instazoom ဓာတ်ပုံများကိုချဲ့ရန်။
- ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံဖိုင်များကို လက်ခံကျင်းပခြင်းမပြုပါ။
- ဤဝဘ်ဆိုဒ်သည် ခိုးကူးခွေများကို မပံ့ပိုးပါ။
- ကျွန်ုပ်တို့ကို မဆက်သွယ်မီ ဤစာမျက်နှာ- DMCA ကိုဖတ်ပါ။
- သင်သည် ပုံတစ်ပုံ၏ မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ပြောင်းလဲခြင်းကို တားဆီးလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ပါ။
ဤပုံများကို ပြောင်းလဲခြင်းမှ ရပ်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှင့်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]